Obama oo la filayo in uu shaaca ka qaado qorshaha mareykanka ee dalka Afghanistan – SBC
Obama oo la filayo in uu shaaca ka qaado qorshaha mareykanka ee dalka Afghanistan
Washington:- Aqalka cad ee mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in maanta oo rabaca ah lagu wado in madaxweyne Obama uu ku dhawaaqi doono qorshihiisa ku aadan marxalada koowaad ee ciidamada mareykanka looga soo saarayo dalka Afghanistan.
Mareykanka　ayaa waxa hadda ka jooga dalka Afghanistan ciidan tiradooda gaarayso 100 kun oo askari kadib markii uu madaxweyne Obama uu go’aansaday bishii December ee sanadkii 2009 in uu u diro 30 kun oo ciidamo dheeraad ah dalka Afghanistan si loo yareeyo weerarada kaga imanayo isbahaysiga NATO dhaqdhaqaaqa Daalibaan iyo ururka Al-qaacidda.
Madaxweyne Obama ayaa balan qaaday in　bisha July 2011 uu bilaabi doono howlaha ciidamada mareykanka uga saarayo dalka Afghanistan.
Aqalka cad ee mareykanka ayaan shaaca ka qaadin waqti go’an oo ciidamada mareykanka looga saarayo dalka Afghanistan xilli warbixinada laga helayo Pentagon-ka ay sheegayaan in qorshaha ciidamo kala bixidda uu ku xiran yahay hadba xaaladda ka jirta　dalka Afghanistan.
Mar si horeysay xoghayaha gaashaandhiga mareykanka Robert Gates ee la filayo in dhowaan in uu xilka ka dego ayaa shaaca ka qaaday in wax uu ugu yeeray guulo la taaban karo laga gaaray dalka Afghanistan.
Laakiin Gates waxa uu ka digay in guulahaas ay bururi karaan haddii aanan horumar laga sameyn qorshaha amaanka loogu wareejinayo ciidamada Afghanistan.
Gates ayaa markii ugu horeysay toddobaadkan qiray in ay socdaan wadahadalo lagula jiro xarakada Daalibaan.
Toddobaadkii la soo dhaafay 27 xubnood oo Congress-ka mareykanka oo katirsan xisbiyada dimuqaraadiga iyo Jumhuuriga ayaa u diray madxweyne Obama warqad ay uga codsanayaan in madaxweynuhu la yimaado istiraatiijiyad cusub oo ku aadan dalka Afghanistan.
Inkastoo muwaadiniin badan oo Afghanistaniyiin ay doonayaan in ciidamada caalamiga ay sii joogaan dalka Afghanistan si loola dagaalamo xarakada Daalibaan haddana waxaa sii kordhaya carada shacabka Afghanistan ee ku aadan joogitaanka ciidamada shisheeye ee duqeymaha kuleenaya dadka rayidka ah.
Barlamaanka dalka Iran oo wada qorshe xilka looga xayuubinayo Cali Akbar Saalixi
Tehran:- Barlamanka dalka Iran ayaa shaaca ka qaaday in uu dadaal ugu jiro sidii xilka looga qaadi lahaa wasiirka arrimaha dibadda Cali Akbar Saalixi kadib makii uu u magacaabay shakhsi ka agdhow xafiiska madaxweynaha Iran Maxamuud Axmedi Najaad in uu u noqdo kuxigeenkiisa wasaaradda arrimaha dibadda.
Bayaan lagu faafiyey website-ka barlamanka Iran oo ay ku saxiixnaayeen 33 xildhibaan ayaa lagu sheegay in barlalamnku uu soo saari doono dikreeto xilka looga xayuubinayo wasiirka arrimaha dibadda Cali Akbar Saalixi.
Wasiirka ayaa laga doonayaa in uu hor yimaado barlamaanka muddo toban maalmood gudahood islamarkaana uu naftiisa daafaco uuna dalbado kalsooni mar labaad.
Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa kagadaal markii Saalixi uu u magacaabay Maxed Shariif Maalik in uu noqdo kuxigeenkiisa arrimaha maamulka iyo maaliyadda.
Mr Maalik ayaa ahaa mid kamid ah mas’uuliyiinta kujirta golaha sare ee arrimaha dibadda ee madaxda ka yahay Asfandiyaar Raxiim oo ah madaxa la taliyayaasha madaxweynaha Iran.
Barlamanka Iran ayaa sheegay in magcaabidda Maalik aysan dan ugu jirin maslaxadda qaranka islamarkaana ay wiiqayso nidaamka islaamiga ee jumhuuriyadda Iran.
Sidoo kale Maaliki ayaa ah nin xilli kasta la xiro maadaama baaritaan ku aadan arrimo maaliyadeed ku socdo.